Al Shabaab oo si adag udifaacday Xoolo Zakawaat ah oo ay dhici rabeen Maleeshiyaad daacad u ah ciidamada Itoobiya.
1939 qof oo Saacado gudahooda Mareykanka ugu dhimatay Carona Virus.
Dab khasaara hantiyadeed dhaliyay oo ka kacay degmada Hodon.
Saturday November 30, 2019 - 21:18:19 in Wararka by Liibaan Jeexoow
Warar dheeraad ah ayaa kasoo baxaya iska hor'imaadyo xooggan oo duleedka magaalada Baardheere ku dhaxmaray ciidamada Xarakada Shabaabul Mujaahidiin iyo maleeshiyaadka dowladda Federaalka.
Wararka laga helayo gobolka Gedo waxay sheegayaan in dagaal khasaara badan dhaliyay uu xoogaga Al Shabaab iyo maleeshiyaad Amxaara kalkaal ah ku dhaxmaray tuulada Daar oo qiyaastii 30 KM ujirta magaalada Baardheere.
Ilo wareedyo ayaa xaqiijinaya in ciidamada Al Shabaab ay si adag uga hortageen isku day ay maleeshiyaadka daacadda u ah Itoobiya ay ku doonayeen in ay ku dhacaan xoolaha Zakawaatka oo wilaayada islaamiga Gedo uqeybinaysay dadka fuqarada ah.
Goobta dagaalka ayaa lagu arkay meydadka illaa 4 askari oo kamid ahaa ciidamadii duullaanka kasoo qaaday degmada Baadheere, ciidamada Al Shabaab ayaa si adag udifaacay deegaanka iyo xoolihii Zakawaatka ee ay damacsanaayeen in ay dhacaan.
Wararkii ugu dambeeyay ayaa sheegaya in xoogaga Al Shabaab ay goobta dagaalka ka daabusheen hub iyo saanado kale oo ay ka reebteen maleeshiyaadkii weerarka soo qaaday. Saraakiil katirsan Shabaabul Mujaahidiin ayaa warbaahinta islaamiga ah u sheegay in qeybinta xoolaha Zakawaatka ay si habsami leh uga socoto deegaanka Wilaayada Gedo.
Maleeshiyaadka weerarka soo qaaday oo ay soo abaabuleen taliska ciidamada Itoobiya ee Baardheere ayaa loo xilsaaray in ay carqaladeeyaan ku dhaqanka Shareecada islaamka.
Carona Virus oo haleelay boqolaal kamid ah ciidamada Faransiiska.
Ciidamada Mareykanka oo isaga baxay saldhigyo ay ku lahaayeen wadanka Ciraaq.
Al Shabaab oo sheegatay Mas'uuliyadda qarax ka dhacay Gaalkacyo.
Qarax gaari looga gubay ciidamada AMISOM oo ka dhacay Madaarka Jowhar.
Taliyaha ciidamada dowladda oo isku day dil ka badbaaday.
Weerar ka dhacay duleedka Jannaale oo gaari looga gubay Ciidamada DF.